ငါ့အချစ်တော်တိရစ္ဆာန်များချိန်းတွေ့ » အဘယ်ကြောင့်အထပ်မြင့်မိန်းကလေးများတို့ Date
နောက်ဆုံးအပ်ဒိတ်လုပ်: စက်တင်ဘာ. 17 2020 |2မိဖတ်ပြီးသား
ထွက်သူကားအဘယ်သူသူတို့သည်ထာဝရထက်မိန်းကလေးတစ်ဦးကြီး၏သို့မဟုတ်သူတို့ကိုထက်ယောက်ျားတစ်ယောက်တိုတောင်းရက်စွဲပါခဲ့သည်? ဘယ်လိုသွားခဲ့ပါ? ကကိုးရိုးကားရားတွေဒါမှမဟုတ်အဆင်ပြေခဲ့? ဤကိစ္စကိုယခုခ​​ဏတစ်ချိန်းတွေ့မြင်ကွင်းတစ်ခု boggling ခဲ့သည်, တချို့လူတွေသူတို့ကိုထက်ပိုမိုတိုတောင်းရက်စွဲမိန်းကလေးများကသူတို့ကိုထက်အရပ် သာ. မြင့်သို့မဟုတ်ယောက်ျားတွေဘဲယုံကြည်အဖြစ်. ဒါဟာသီအိုရီအအချက်အလက်များနှင့်အတူ demystified ခဲ့သည်မြင့်မားအချိန်င်!
အိုကေ, ထို့ကြောင့်ဖြစ်နိုင်ဖွယ်ကြောင့်ယောက်ျားတွေကြီး၏ဖြစ်ရှိသည်ဟုယုံကြည်င်ကတည်းကပိုမိုတိုတောင်းသောသူတစ်ဦးလေးကိုနမ်းဖို့ကိုဆင်း လာ. ဦးချနည်းနည်းအဆင်မပြေခံစားရနိုင်? သို့သော်ရှိရာအုပ်ချုပ်မှုမှလာခဲ့? ဒါကြောင့်အတိုချုပ်ယောက်ျားတွေနဲ့အရပ်ရှည်ရှည်မိန်းကလေးများချိန်းတွေ့မြင်ကွင်းတစ်ခုအတွက်ကြောင့်စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများ၏ရိုးရိုးယနေ့အထိဘယ်တော့မှမသင့်ကြောင်းဆိုလိုတာ?
အရပ်မြင့်သောမိန်းကလေးရေတိုကောင်လေးနှင့်အပြန်အလှန် likes လိုလျှင်အဘယ်သို့? တကယ်တော့ကြီး၏မိန်းကလေးများနှင့်ပိုမိုတိုတောင်းယောက်ျားတွေကြိုက်တတ်တဲ့ကြသူများရှိအဖြစ်ကအားလုံးကိုပုဂ္ဂိုလ်ရေးဦးစားပေးရွေးချယ်မှုမှဆင်းပြုတ်သင့်ပါသည်, ယုံကြည်သို့မဟုတ်မ! ဒီလိုလူတွေသူတို့ချိန်းတွေ့နှင့်အတူပေါ်သွားလိမ့်မည်, မသက်ဆိုင်ဘဲမူလကတခြားသူတွေပြောတာကို.
နေသမျှကာလပတ်လုံးယောက်ျားတစ်ယောက်နှင့်မိန်းကလေးတစ်ဦးရဲ့တစ်ဦးချင်းစီကတခြားအမြင့်နှင့်အတူသက်သာဖြစ်သကဲ့သို့, ထို့နောက်တခြားဘယ်သူမှမသူတို့အပေါ်မှာသူတို့ရဲ့ထင်မြင်ယူဆချက်စည်းကြပ်ဖို့ကြိုးစားပိုင်ခွင့်ရှိတယ်. အချို့သောနေဆဲအဖေပြီးအောင်ထက် ပို. လွယ်ကူကြောင်းဆိုသည်ကိုငြင်းရလိမ့်မယ်အဖြစ်ကြောင့်ဤသီအိုရီ demystified ပါပြီရန်လိုအပ်သောကြောင့်, ယောက်ျားတွေပဲအမြဲတမ်းမိန်းကလေးတွေထက်အရပ် သာ. မြင့်ဖြစ် Wired ကလည်းဒါကိုဖြစ်ကြောင်းဖြည့်စွက်, သူတို့ပိုမိုတိုတောင်းနေကြသည်လျှင်အစဉ်အမြဲအဆင်မပြေခံစားရပါလိမ့်မယ်.
ဒါဟာယောက်ျားတွေသေချာပေါက်ပေါ်မှတ်ချက်ပေးရန်မည်မဟုတ်ကြောင်းဆိုသည်, ဒါပေမယ့်သူတို့လုပ်အချို့သဘောထားမှတ်ချက်သူတို့အရပ်မြင့်သောမိန်းကလေးတစ်ဦးနှင့်အတူဘယ်လောက်မသက်မသာဖော်ထုတ်ပါလိမ့်မယ်. သူတို့ကိုယ်သူတို့လောက်မလုံခြုံသောသူသည်ယောက်ျားတစ်ယောက်အကြောင်းဆွဲဆောင်မှုဘာမှဆိုတာဘယ်တုန်းကမှမရှိခဲ့ဖူး.
ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်ယုံကြည်စိတ်ချမှုအစဉ်အမြဲထိုကဲ့သို့သောကိစ္စရပ်များတွင်တစ်ဦးကြီးမားတဲ့အခန်းကဏ္ဍက. ထိုသူတို့သည်စယနေ့အထိရှိသည် ကစ., ထို့နောက်အတိုယောက်ျားတွေမိမိတို့ကိုယ်ပိုင်အသားအရေအတွက်ယုံကြည်စိတ်ချနှင့်သူတို့၏အမြင့်စိတ်ပူဖြတ်ရန်ရှိသည်. ဤသည်မှာပင်သူတို့ fancied အကြင်အရပ်ရှည်ရှည်မိန်းကလေးတစ်ယောက်နှင့်အတူနေ့စွဲဂိုးသွင်းနိုင်, ဒါပေမယ့်ကြောင့်, သူတို့အမြင့်၏သူတို့နှင့်အတူထွက်သွားမယ်လို့ထင်ဘယ်တော့မှမ.
အိုဟုတ်တာပေါ့, ထိုသူတို့သည်စကိုယ့်ကိုယ်ကိုသင်ယူရန်အချိန်အနည်းငယ်အမှုအရာရှိသည်အဖြစ်အရပ်ရှည်ရှည်မိန်းကလေးများ့သေးပြုံးမနေသင့်. တစ်ဦးပိုမိုတိုတောင်းကောင်လေးတစ်ယောက်နှင့်ချိန်းတွေ့သင်သည်သူတို့၏လည်ချောင်းသည်ဆင်းသူတို့ရဲ့အမြင့်ချို့တဲ့ shove ပိုင်ခွင့်မပေးပါဘူး. ကောင်လေးကချိုးပေးပါ, သင်သည်နမ်းခြင်းကိုပေးစေခြင်းငှါသကဲ့သို့ tiptoe မှရှိခြင်းသည်မလုံလောက်၎င်း၏ခက်ခဲ!
မြင့်သော, မှောင်မိုက်, နှင့်ချောမောစံဖြစ်နေစရာမလိုဘူး. အမြင့်ဆွဲဆောင်မှုကြည့်သလောက်, ပိုပြီးဆွဲဆောင်မှုဖြစ်ကြောင်းဝိသေသလက္ခဏာများရှိလျှင်ကဆုံးဖြတ်ခြင်းအချက်တစ်ချက်မဖြစ်သင့်.
အမြင့်အယနေ့အထိမထားပါနဲ့, ရက်စွဲလူတစ်ဦး! အရပ်ရှည်ရှည်သူသည်ယောက်ျားတစ်ယောက်ကိုရှာအတော်လေးဖြစ်နိုင်ချေကြောင့်ဖြစ်ပါသည်, ဒါပေမယ့်ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးတစ်ခုသို့မဟုတ်ပဲပင်သဘောထားဟာအရွယ်အစားနှင့်အတူ. တူညီသောမိန်းကလေးအဘို့အသွား. အမြင့်အသာအသေးအဖွဲအချက်တစ်ချက်ဖြစ်သင့်, မဆုံးဖြတ်ခြင်းအချက်တစ်ချက်. တစုံတယောက်ကိုမိမိတို့အလိုအမြင့်နှင့်အတူပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးချိန်းတွေ့ကြဖြစ်သွားမယ်ဆိုရင်, ကောင်းစွာနဲ့အကောင်း. အကယ်. မ, ဒါကြောင့်အခုထိကောင်းကောင်းနှင့်ကောင်းမွန်သောဖြစ်ပါသည်.
ရက်စွဲများကိုရှာဖွေနေသည့်အခါပထမဦးစားပေးအဖြစ်အမြင့်ကိုတင်တော်မူသောသူတို့အဘို့, သူတို့ဖြစ်ကောင်းပြဿနာတစ်ခုနှင့်အတူသူများဖြစ်နိုင်အဖြစ်ထို့နောက်သူတို့ပထမဦးဆုံးကိုယ့်ကိုယ်ကိုစဉ်းစားဖို့သင့်တယ်. အမြင့်မထိန်းချုပ်နိုင်ပါ, ဒါပေမယ့်စိတ်သဘောထားနိုင်. ဒီတစ်ခါလည်းဒီ demystified တိုတောင်းယောက်ျားတွေနဲ့လိုက်ဖက်အဆင်ပြေမိန်းကလေးများဤသီအိုရီရှိသည်ရန်တစ်ခုတည်းသောနည်းလမ်းဖြစ်ပါတယ်.
5 Romance ကို Regenerate ဖို့စိတ်ကူးများ